Nicky Verstappen Jos Brech dia momba ny fanekena ny angon-drakitra DNA noho ny fiarahana amin'ny ADN amin'ny Internet: Martin Vrijland
NY TOKONY ATAO
Nicky Verstappen Jos Brech dia momba ny fanekena angon-drakitra ADN noho ny fiarahana amin'ny ADN amin'ny Internet
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Novambra 2019	• 12 Comments
Olana fankahalana ary mahatsapa ny rehetra fa meloka i Jos Brech amin'ny raharaha Nicky Verstappen. Milamina ihany izahay amin'izany, satria mahatsapa ihany koa ny rehetra fa raha manana pôrnôgrafia amin'ny ankizy ao amin'ny PC ianao dia mety efa manana an'io fironana io ianao. Raha hita any amin'ny fanambanin'i Nicky Verstappen ny ADN dia famaranana fotsiny izany. Ny zavatra adinonay dia ny hoe mety ho tanteraka io resaka io ary miatrika fandidiana ara-tsaina (PsyOp) isika; a PsyOp izay tsy maintsy anaovan'ny ADN ny valiny. Hitanay ihany koa ny mpisolovava Gerald Roethof, satria maninona no tsy navelany fotsiny ilay vavan'ny mpanjifany, dia vita isika. Hitanay i Peter R. de Vries mahery fo, tsy raisin'izy ireo ho lasa talen'ny fitantarana sarimihetsika.
Efa nanaporofo i Roethof ho mpisolovava an'i PsyOp, satria azony nitaky ny famotsorana avy hatrany an'i Jos B. satria ny ADN dia natao tamin'ny raharaha nanjavany ary nanjary nifaninana tamin'ny raharaha Nicky Verstappen. Azonao atao ny manofina ny soroka, saingy izany no zava-dehibe, satria izany no iray amin'ireo antony nahatonga an'i PsyOp toy izany.
Raha ny fotokevitra, ny ADN dia azo adika mora foana any amin'ny laboratoara, ka raha manana ADN ny olona iray dia azonao atao ny manao azy ho rariny amin'ny akanjo iray ary apetraho ho porofo izany ary mahazo olona voaheloka raha tsy misy porofo manohana fanampiny. izany. Ankoatra izany, afaka mamoaka tatitra NFI fotsiny ianao, satria tsy afaka manamarina izany ianao.
Raha ny marina dia tsy maintsy misy porofo manohana foana mba hamaranana ny raharaha iray ary izay no antony nahatonga ny Serivisy fanenjehana ho an'ny daholobe nandroba ny tahirim-bolam-panjakana tamin'ny alàlan'ny fametahana an-tsary ny Brunssummerheide. Namboarina ho modely 3D ihany koa ny underpants Nicky mba hanomezana firavaka bebe kokoa sy hahafahana milaza marina ny toerana misy ny ADN sy ny fomba mety ho nitranga. Na izany aza, mbola mijanona ho zava-misy fa afaka manao izany ianao aorian'ny fampiharana ny ADN ny tenanao na azonao atao fotsiny ny mamita azy satria ny mpisolovava sy ny ahiahiana dia manao script film ihany koa. Ny andraikitr'i Peter R. de Vries amin'ny tranga rehetra dia milaza fa miatrika olana ara-tsarimihetsika toy izany isika eto. Sarimihetsika misy sarimihetsika miaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika Jos Brech ao amin'ny andraikiny ho an'ny olona tsy hita (mihetsika) ary tsy mihetsika ao amin'ny efitrano fitsarana. Famoronan-tsarimihetsika izay tsy maintsy iomanana ankehitriny ny olona avela handrafitra ny angovo DNA nasionaly sy faharesen-dahatra mifototra amin'ny ADN ihany mba ho voafehin'ny lalàna. Miaraka amin'ny tsy fananana fiarovana ny ADN izay hita tamin'ny tranga tsy hita, dia voafongotra ny lalàna 1. Roethof dia efa latsaka tao anaty harona.
Alaiko ny toeran'ny fanjakana amin'ny ADN, satria izany no mahatonga ny olona hanova ny fototarazo. Izany no nahatonga ny RIVM efa nanomboka amin'ny taona 2000 tsy mitera-dalàna (ary noho izany tsy ara-dalàna) mitahiry ny ADN ny zaza izay azo tamin'ny alàlan'ny voditongotra ao anaty angon-drakitra. Miaraka amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, ny fananana izany ADN dia tena ilaina, satria azonao atao ny manitsy ny ADN olombelona amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fomba CRISPR-CAS12 (jereo ny video eto ambany). Ny hany zavatra ilainao dia io dia bandwidth ampy. Izany bandwidth izany dia azo alaina ankehitriny amin'ny alàlan'ny fananganana tambajotra 5G. Amin'ny teorika, azonao atao ny manitsy an-tserasera ny ADN isaky ny olom-pirenena na aiza na aiza any Holandy. Noho izany tsy maintsy ananana izany ADN izany dia izao izy izao dia mihazona. Mahomby be izany raha nesorinao daholo ny tokonam-panjakana rehetra. Azonao atao ny manova ny ADN amin'ny olom-pirenena raha tsy milaza an'izany. Tena ilaina izany raha toa ka fanjakana ianao no tompon'ny vatan'ny olompirenena ao aminao. Miaraka amin'ny lalàna momba ny fanomezana ny taova, ny faritra rehetra amin'ny vatan'olombelona dia tena fananan'ny fanjakana ary efa nesorina avokoa izany fehin-kevitra izany.
Hitanareo ve fa voadona daholo? Angamba izany dia satria mbola mino ianao fa miaina amin'ny demokrasia tsara sy be fitiavana isika; ao amin'ny firenena poavanta mafana sy mamy ary afaka matoky tanteraka ny fanjakana sy ireo mpiasany mahatoky rehetra isika. Ary manana an'io sary io ianao satria manana ny haino aman-jery izay mikarakara ny fomba fiasa sy ny tafika an-tserasera izay manara-maso ny fifanakalozan-kevitra.
Mba hahafahana mampihatra ny fomba CRISPR-CAS12 dia mila mampiditra ampidirina eo amin'ny vatan'olombelona izay mampandeha ity teknika ity. Izay tsy manana io angovo io dia noho izany dia tsy azo ovaina amin'ny Internet. Inona no mety mahasoa kokoa avy eo raha afaka mametraka lalàna izay mahatonga ny vaksiny tsy maintsy atao, mba hahafahanao manome ny olona rehetra angovo maniry. Mba hananana alibi hahafahana manatanteraka io lalàna io dia aleonao ny aretina misy eto izao no tadiaviny, ka ny olona no mametraka an'io lalàna io. Afaka manao foana ny fitsipika 'Olana, fihetsika, vahaolana'manaiky ny olana misy amin'ny fiantraikany lehibe eo amin'ny fiaraha-monina; alefa amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sy ny media sosialy ny valiny. Io fitantanana io dia atao amin'ny fanekena ny vahaolana izay efa teo amin'ny talantalana. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo hevitra manohitra ny vaksiny amin'ny 'hevitra tsara' sy ny famotehana ny marika «mahitsy» ato ho ato amin'ny alàlan'ny lozam-pifamoivoizana dia afaka miatrika izay rehetra mifandray amin'io marika 'tsara' io ianao. Noho izany dia esorinao koa ny sobika farany izay manakana anao tsy hanao vaksiny ny olona rehetra.
Andeha hojerentsika hoe inona ny toekaren'ny teknolojia.
Ny US amerikanina momba ny fampandrosoana ara-tafika DARPA dia namoaka drafitra mitaky ny miaramila hanovana ny fototarazo mba hanoherana ny fanafihana entona misy poizina. Azonao atao ny mampitaha izany somary amin'ny voany sy ny voan-javatra momba ny fiahian-tena simika Monsanto (nalain'ny Bayer tao 2018). Ireo fambolena ireo dia nohavaozina amin'ny fototarazo ka manohitra ny mpamono ahi-dratsy, izay midika fa ny fiaramanidina mpamono be dia be no afaka ampiasaina hanidina eny an-tsaha famokarana. Ny zava-misy fa ireo fambolena voaova arakaraka ireo dia tsy voasedra tsara alohan'ny nampidirany ny tsena dia misy ifandraisany amin'ny famolavolana politika, saingy mety ho an'ny orinasa mpitrandraka aretina ary noho izany ho an'ny indostrian'ny pharmaceutical (Bayer ny tenany). Ao amin'ny tohan-kevitra hanamorana ny miaramila, ny DARPA dia mampiasa ny fandrahonana ny famelezana biolojika ataon'ny mpampihorohoro. Amin'ny fotoana maharitra, ny olom-pirenena tsotra dia vonona ny hanaiky ny fanovana fototarazo amin'ny Internet, ohatra, mitondra valanaretina izay tsy nahitana vaksiny iray. Ny tohan-kevitra dia ny hamelanao ny vatana hamokatra anti-simika tsy mila hamokatra sy hitahiry vaksiny be dia be.
Walker dia nilaza fa mety ny hevitra manaparitaky ny miaramila ho amin'ny fandrahonana, satria tsy dia ilaina intsony ny mitahiry fanafody na fanafody amin'ny fandrahonana rehetra mety hitranga.
“Tsy afaka manana vatsy ampy na vaksiny ianao mba hiarovana ny vahoaka amin'ny ho avy. ... Izany no fikarohana topika rehetra - tsy mbola manan-tsafidy isika, "hoy izy", fa izany no antony itiavanao ny vatanao ho orinasa mpamorona antibiôsy. "
Vakio fotsiny ny fanadihadiana iray manontolo amin'ny talen'ny DARPA Steven H. Walker ity lahatsoratra ity ao amin'ny tranonkala defense.gov.
Isika dia ao anatin'ny toe-javatra iray ahafahan'ny governemanta mihanaka ny ADN olombelona eo ambany fiadian'ny fiarovana ny fihanaky ny viriosy sy ny areti-mifindra. Ary noho izany dia tsy niresaka momba ny fahaizana mamaky ny sainao amin'ny alàlan'ny interface tsara amin'ny atidoha aho. Tsy mahafinaritra ve raha ny fanjakana no afaka mijery ny lohan'i Jos Brech hamaky ny fahatsiarovana azy? Fantatrao ve ankehitriny fa ireo tranganà fampamonoana niely be dia be ireto dia mety hanaisotra ireo sakana rehetra amin'ny fepetra raisin'ny polisy? Raha eo am-pelatananan'ny governemanta tsy azo itokisana ireo fomba ara-teknika ireo miaraka amin'ny tetika fasista eugenic, dia tena manana olana isika. Ny teknôlôjia hanitsiana ny fitovian'ny olombelona manontolo amin'ny rahona dia misy. Tsy izay angano fotsiny ny siansa. Ny hany ilainao dia ny ADN amin'ireo olom-pirenena rehetra. Atao amin'ny fomba feno fiantrana izany amin'ny fanafana azy ireo amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra mba hahitana ny taranany na amin'ny alàlan'izy ireo manao fanadihadiana ny ADN mba hanamarinana ny toe-pahasalamany. Manao izany amin'ny alàlan'ny PsyOps ianao izay mandresy lahatra ny olona fa mamaha ny raharaha famonoana ny ADN.
Alaharo izao ny bokiko vaovao izay omeko ny famaritana feno ny fitaka rehetra sy ny fitaka izay anaovana ny vahoaka ary manazava ihany koa ny vahaolana.
Lisitry ny rohy loharano: trouw.nl, defense.gov
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ampiasaina ankehitriny mba hangataka fanambarana amin'ny mpanjifa amin'ny mpisolovava?
Inona no atao hoe Deepfakes ary inona no naharetan'io tranga io?
Tags: advocaat, B., Brech, Bruns Bucket Heath, cel, de, ADN, tsy nahy, fepetra, Gerald, Js, pôrnôgrafia, Nicky, OM, underpants, Peter, R., Roethof, titres, sazy, fepetra fanasaziana, Verstappen, zavatra mavesa-, mandry
Zandi Eyes nanoratra hoe:
20 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 51
izy ireo dia tsy hanaiky ny Soratra Masina mihitsy ny an-tsoratra ka noho izany dia hanohy ny famindram-po tsy ahitam-bokatra.
Mikaroka ny "mikraoba militaire" ny DARPA, amin'izay izy ireo dia afaka manaparitaka ny bakteria voaova toetra
Ny Pentagon's DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dia maniry ny afaka manaparitaka ny bakteria voaova toetra ho "sensor explosives". Ny governemanta amerikanina dia afaka nikaroka fomba hitadiavana mikroba.
Amerika dia efa nampiasa miaramila voaforona (miaramila tena mahery) tao anatin'ny fifandirana namboarina manokana tany Atsinanana. Faritra iray tena mety hisedrana zavatra vitsivitsy, rehefa nitsapa tamim-pahombiazana ny Ady Telona voalohany V2k (feno duplex comm. Azo atao miaraka amin'ny 5G)
20 Novambra 2019 ao amin'ny 20: 35
Oh eny .. ary ny iray amin'ireo zo tokony hino dia ny "ny zo hangina"
Raha manapa-kevitra ny hangina ianao, eny, hijanona tsara sy mafana ao amin'ny sela ianao.
20 Novambra 2019 ao amin'ny 22: 10
Azonao atao ihany koa ny mampihetsika ny otrikaretina amin'ny alàlan'ny fisehoana matetika. Raha mihanaka ny mikraoba dia tsio-drivotra mihitsy io.
Ny fomba fanovana génomisma CRISPR / Cas9 dia fitaovam-piadiana manohitra ny otrik'aretina olombelona
21 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 57
Nohajakoiko ho fototra hatrany ny atiny amin'ity lahatsoratra ity, fa afaka mitory virus fotsiny ianao amin'ny alàlan'izany vaksiny izany (amin'ny alàlan'ny fiadiany. Azonao atao ny mihevitra ny vatan'olombelona ho toy ny programa solosaina famerenana izay azonao atao ny manampy sy manova. Tena lasa biocomputers mandeha izahay.
Noho izany dia mila fifandraisana data mivantana ianao ary atao amin'ny alàlan'ny tamba-jotra tsy misy tariby 5G.
Ao amin'ny bokiko dia manazava aho fa afaka manao dingana bebe kokoa.
21 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 32
Martin, ianao milaza hoe (Vakio sy hosoratana) ny helikoptera AD (genome sequencing) matetika dia mampiasa matetika. Ary izay nofaritan'i Zio ho toy ny serasera duplex feno dia efa manaporofo fa misy fifandraisana marina amin'ny Sentient Grid (SWS - Hive saina) ka tena tsy misy afa-mandositra mihitsy aza ..
Ahoana ny fanovana ny fiainany: fototarazo mamaky (Read - Writing (RW))
DARPA Avatar Project
Araka ny filazan'ny masoivoho, "ny programa Avatar dia hamolavola ny fifandraisana sy alàlan'ny algorithm amin'ny alàlan'ny miaramila iray ho afaka hiara-miasa amin'ny milina semi-autonomous bi-pedal ary hamela azy io ho toy ny famerenan'ny miaramila."
Tokony ho manan-tsaina sy mora tohina hanao ireo maloto ady ireo robots ireo, hoy i Darpa nanamarika. Ao anatin'izany ny "fanadiovana ny efitrano, fanaraha-maso ny komina ary hiadiana amin'ny famerenam-po." Ary ny rehetra amin'ny fandefasana ny mpiara-miasa aminy.
NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA DIA: ATAOVANA NY FAHAGAGANA ANAO AN-TOKONY DIDITANA
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny supercomputers voalohany, rafitra mifehy ny saina; napetraka ny atidoha sy ny fitondran-tena. Ity dia ampahany amin'ny siansa vaovao momba ny cybernetics, izay lasa public 1948 rehefa namoaka ny bokiny miaraka amin'ny lohateny ny profesora amerikana Norbert Wiener.
21 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 40
Tsia, niresaka momba ny fomba CRISPR-CAS12 aho araka ny nohazavaina tao amin'ny famelabelarana TED eo ambany faran'ny lahatsoratro.
21 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 05
Eny, manana antony ampy hieritreretana aho fa ampahany amin'ny jigsaw jigsaw ny fomba fanao CRISPR-CAS12 ary ny Control Grid koa dia manana singa Neurological / Cognitive izay azo zakaina ..
Jereo ny antontan-taratasin'ny Men of Men sy ny antontan-taratasy Harvard etsy ambony.
"Ilay génomaly dia nentim-paharazana ho toy ny Read-Only Memory (ROM) hovana amin'ny alàlan'ny fanalavoana ny hadisoana sy ny loza."
21 Novambra 2019 ao amin'ny 18: 33
Miombon-kevitra ihany koa aho amin'izany, saingy maro no hanafoana izany ho toy ny teha-piraisana tsikombakomba ary koa izany dia asehoko ny efa hita mazava tsara eo amin'ny sehatry ny siantifika hita maso..tamin'ny nanolorany ny CRISPR-CAS12 ary noho izany ny fanondroana ny atidoha- solosaina interface tsara. Ho an'ny farany dia manoro hevitra anao aho hijery ny famelabelarana an'i Elon Musk amin'ny YouTube momba ny Neuralink amin'ny YouTube na ato amin'ny tranokala.
Mind Supply nanoratra hoe:
21 Novambra 2019 ao amin'ny 22: 15
Azoko antoka fa tonga teto teto ianao. Nahita sarin'ireo olona voatanisa nanao tombokavatsa (eo an-tanany) ny sarin'ireo kambana voalohany misy loha roa. Manana maso mainty jet izy ireo. Toa misy ny olana amin'ny masony. Tsy afaka manao azy ireo ho voajanahary tanteraka ry zareo.
Raha ny hevitro manokana, dia io voalazan'ny lehilahy io ao amin'ny horonan-tsary 'UN' no navoakanao teto.
Tahaka ireo robots ampiasaina amin'ny fandaharam-potoanany izy ireo. Dia ho an'ny mpikarama an'ady.
Izy ireo ihany no tsy mahazo vola amin'izany ((fialofana sy mofo ihany).
Eng .. Fa aiza ...
21 Novambra 2019 ao amin'ny 22: 31
eh .. ny hevitry ny ZandinOgen aho,,,
21 Novambra 2019 ao amin'ny 23: 49
Martin, azonao ny fitandremana ... fa ny olona ihany no tsy maintsy mandalina ny fikarohana nataon'i Delgado tamin'ny taona 60 mba hahatakarana fa ny siansa dia nanao fantsom-pandresena sasany tato anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ary mba hampiasa avy hatrany ny teny CIA ho toy ny 'theoristist'
Fakafakao nanoratra hoe:
24 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 20
« Ny dadaben'ny raibe Greta Thunberg dia lasa mpamorona ny fiantraikany eny an-trano sy ny fampihenan'ny mponina amin'ny alàlan'ny eugenika
Maninona i Trump dia tsy anti-globalista fa trano aristokrasia hafa »
MANDROSO NY BATOLA ARY ATAO FILANY IZY
boky bebe kokoa
fanohanana bebe kokoa
JOLAY 2017 JOLAY 2020 - FEB XNUMX
Total visits: 1.441.469
Krizy Corona: Mety haharitra 2 ka hatramin'ny 3 taona ny fivoahana hanidy raha tsy misy ny fanaraha-maso sy ny fampiharana mialoha
Ny eritreritra lehibe: izao tontolo izao no hamboarintsika aorian'ny krizy corona?
Coronavirus covid-19 sy siansa: Ahoana ny fomba hidirany ao amin'ny vatanao ary amin'ny fomba ahoana no hamindranao azy?
Coronavirus: avy aiza ny otrikaretina ary ahoana ny fomba ananan'izy ireo sy ny mivezivezy?
Ny fomba mahomby indrindra hiadiana amin'ny coronavirus dia avy any Sina (video)
Martin Vrijland op Krizy Corona: Mety haharitra 2 ka hatramin'ny 3 taona ny fivoahana hanidy raha tsy misy ny fanaraha-maso sy ny fampiharana mialoha
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19 sy siansa: Ahoana ny fomba hidirany ao amin'ny vatanao ary amin'ny fomba ahoana no hamindranao azy?
Zonnetje op Coronavirus covid-19 sy siansa: Ahoana ny fomba hidirany ao amin'ny vatanao ary amin'ny fomba ahoana no hamindranao azy?
jupasch op Ny eritreritra lehibe: izao tontolo izao no hamboarintsika aorian'ny krizy corona?
Zandi Eyes op Coronavirus covid-19 sy siansa: Ahoana ny fomba hidirany ao amin'ny vatanao ary amin'ny fomba ahoana no hamindranao azy?
Hifarana ity horonana ity:
Alao ny fandaharana virus ankehitriny: